Downloads Catalog Company
Waayo, mid lagu daray
2D PC + Aluminum Case Sheet Phone
2D Flexi (jilicsan Film + TPU) Case Phone
2D TPU + PC + Sheet Aluminum Case Phone
PU + cover Leather Phone
Color bakeerigaagu Beddelidda
iyo malqacad bakeerigaagu
Bakeerigaagu xamili Gaarka ah
Sports Aluminum Dhalo
Ahama Steel bakeerigaagu
Hagaajiyey Glass Plate
Sublimaton Board MDF
MDF Photo Meegaarka
MDF Door gaajoonayay
MDF shandadaha tag
MDF Xal xidhaalaha
MDF Qaboojiyaha magnet
items Sublimaton qabriga maryo
Flip Sublimation Flop
Sublimation cover barkin
Sublimation Baby dhar cunug
oo daahyada oo Maydho Sublimation
Sublimation derin Yoga
Sublimation Gacan darafta
Guddiga Jarida Glass
Qaab Square Crystal
Qaab Round Crystal
Dambiisha Sublimation & boorsada
Lady ayaa Gym Bag
Mouse suufka & Xal xidhaalaha
Macdan sublimation Articles
Birta Tin sanduuqa
Mobile Pop saldhig
Bilaabe Dhalo ahama
Sublimation Christmas meelaha banaan
Machine Transfer Rotary
Buugga dagan Shell Heat Press
Machine Transfer Haydarooliga
Combo / Multifunction Heat Press
Bakeerigaagu Heat Press
Plate jaraa'id Cap Pen Heat
3D mashiinka Sublimation Vacuum
3D-saxaafadeed kulaylka vacuum
UV Daabacaadda meelaha banaan
Case Phone for Daabacaadda UV
Case Phone Customized
Location: Index > News & Support> FAQ >
Ma Htpmart soo saaraha ama ganacsade?
A: .Waxaan leedahay warshad kiiska phone halkaas oo ay soo saaraan 2D kiiska phone pc adag, 2D kiisaska phone TPU caag jilicsan, kiisaska phone 3D, Flip 2D xaalado maqaar PU Phone, kiiska phone 2D Flexi TPU.
Isla mar ahaantaana, waxaan leenahay line daahan ee Shangdon Provience meesha soo saarka noocyada kala duwan ee koobabka dahaarka leh, taarikada, marmarka, noocyada kala duwan ee dhalooyinka aluminium isboortiga, dhalooyinka steel stainess, koobabka dhalooyinka ECT.
Sida loo dhigo si on Htpmart?
A: Tallaabada 1.Choose waxyaabaha aad xiisaynayso, iyo tiro aad u baahan tahay, ka dibna baaritaan ku soo diri noo by email .Hubi in aad leedahay hab xiriir sax ah gaar ahaan cinwaan email shaqaynaya. Haddii aad u baahan tahay kharashka maraakiibta, fadlan noo soo sheeg cinwaankaaga bixinta ama magaca dhow dekedda caalamiga ah in aad.
Tallaabada 2. Waxaan u jawaabi doonaa su'aalo aad maalin 1working gudahood (u badan tahay in ay muddo 24 saacadood gudahood). Mar kale, sharaxaad aad u faahfaahsan oo ku saabsan amarka iman kara iyo ganacsigaaga
jihada noqon mid wax tar leh in reply ku ool lahaa.
Talaabada 3: Waxaad qaadan kartaa baarka free leh qiimaha yar thanUS $ 5. Muunad kasta oo loo baahan yahay ka baxsan qiimaha waxaa laga qaadi doonaa. Sidoo kale waxaa looga baahan yahay in aad bixiso ah
kharashka bixinta saamiga by oogeen, UPS ama iyaduna.
Talaabada 4: Marka aad xaqiijiso amarka, waxaanu ku siin doonaa biilka proforma faahfaahinta bangiga our ah. Waxaad u baahan tahay in aad lacagta ama T / T (Transfer Telegraph) ama Western Union iibsiga ama PayPal ama kaarka Credit (cadadka yar oo keliya)
Tallaabo 5: Marka bixinta xaqiijiyay, waxaannu raaci doonaa amarka iyo markab alaabo aad si sida ugu dhaqsaha badan. Haddii aan kaydka ka mid ah waxyaabaha aad nala on alaabta aad rabto, waxaan markab doonaa mid sahlan.
Sidee Htpmart alaabta noo samatabbixi?
A: alaabtana korinnaa in aad badda haddii alaabta bulkly waa, laakiin haddii alaabta yar yar yihiin, waxaan kuu diyaarin doonaa alaabtana by hawada, waxa ay noqon doontaa wax dheeraad ah si dhakhso ah. Dhammaan waxay ku xiran tahay baahida aad hadda iyo raaxadeeda waxa ugu.
Sidee dheer hogaanka?
A: Sida caadiga ah waxaan leenahay stock, mar alaabta ku leeyihiin waxay xaqiijinayaan, waxaanu kuu qabanqaabin karaa alaabta hal todobaad gudahood. Haddii amarka bulkly ama habka yahay, wakhti dheer noqon doono, faahfaahin dheeraad ah waxaad la tashan kartaa in our wakiilka iibka.
Cinwaanka: Floor 5aad, Block B, Fenghua Industrial Park, Degmada Longgang, Shenzhen, Shiinaha
Copyright (C) 2008-2018 Shenzhen Enxiao Technology Co., Ltd. .Dhammaan Rights Reserved